० तपाईंले निर्वाचन आयोग र आफ्नै पार्टीविरूद्ध किन रिट दायर गर्नुभएको छ ?
— राजपा नेपालले प्रदेश २ मा समानुपातिकतर्फ पाएको १० सिटमध्ये दुई जना दलित समुदायलाई पठाउनु भनेर निर्वाचन आयोगले चिठ्ठी पठाएको अवस्थामा राजपाले बन्दसूचीमा एक मात्र दलित मलाई पठाउँदा क्रम संख्या मिलेन भनेर आयोगले मेरो नाम हटाउन लगायो । सुरूमा राजपाले मेरो नाम राख्यो पछि विभिन्न कारण देखाउँदै षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या भयो ।
० तपाईंलाई आफ्नै पार्टीले पनि विभेद गरेको हो ?
— म पार्टीलाई दोष दिन चाहन्न । किनभने राजपाले मेरो नाम दुई–दुई पटक पठाएकै हो । तर, राजपाका केही नेताहरू छन्, जसका श्रीमती, बाहरबाली पर्नेबाला थियो, उनीहरूले आयोगका प्रमुख डा. अयोधिप्रसाद यादवसँग आर्थिक चलखेल र लेनदेनको कुरा गरेर मेरो नाम हटाउन लगाइएको हो । निर्वाचन आयोगकै कारण मेरो प्रतिष्ठामा आँच आएको हो ।
० निर्वाचन आयोगका प्रमुखले आर्थिक लेनदेन गरेकै हो ?
० यसको प्रमाण छ तपाईसँग ?
— मसँग प्रमाण त छैन । तर, निर्वाचन आयोगमाथि लागेको आरोप आगामी दिनमा प्रष्टिन्छ नै ।
० सर्वोच्च अदालतले के आदेश दिएको छ ?
— सर्वोच्च अदालतले १५ दिनको समय दिएर कारण देखाउ आदेश दिएको छ । राजपाको तर्फबाट एक मात्र दलित उम्मेदवार रामप्रवेश बैठालाई किन हटाइयो भनेर कारण माग गरेको हो । नेपालको सर्वोच्च न्यायालय सबैको आस्थाको केन्द्र रहेकोले म सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि पुगेको हुँ । मलाई विश्वास छ, सर्वोच्च अदालतबाट म न्याय पाउँछु ।
० भनेपछि, आयोगकै कारण तपाईंमाथि अन्याय भएको हो ?
— मैले रिटमा प्रमुख विपक्षी निर्वाचन आयोगलाई नै बनाएको छु । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश २ निर्वाचन कार्यालय, राजपा कार्यालय र मेरो ठाउँमा आर्थिक चलखेल गरेर आएका व्यक्ति नेत्रविक्रम शाहसमेतलाई मैले विपक्षी बनाएको छु ।
० नेत्रविक्रम शाह को हुन् ?
— नेत्रविक्रम शाह पार्टीको कार्यकर्ता भए पनि उनलाई पार्टीमा धेरैले चिन्दैन । यस्तो अवस्थामा मलाई, जो मधेशवादका लागि संघर्ष गर्दै आए, मलाई नै विस्थापित गराइदियो । म तत्कालीन तमलोपा निर्माणकालदेखि नै आफ्नो योगदान दिएको हुँ । पार्टीमा मेरो धेरै योगदान छ, आज मलाई उपेक्षा गरियो । म न्याय पाउने कि नपाउने ? सुरूमा मेरो नाम पठायो र पछि हटायो । यसबाट मेरो सामाजिक प्रतिष्ठा गएको छ । यसको भर्पाई राजपा र निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छन् ? त्यसैले म सर्वोच्च अदालतमा न्यायका लागि गुहार गर्न पुगे । अहिले संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा छ । न्यायालयले दलितको हकमा न्याय गर्नेछ भन्ने विश्वस्त छु ।
० तपाईंले पार्टीलाईसमेत विपक्षी बनाउनुभएको छ, पार्टीले तपाईंलाई कारबाही गरेन ?
— मैले पार्टीलाई विपक्षी बनाएको छैन, बोदार्थ मात्रै दिएको छु । अब पार्टीले मेरो योगदानको मूल्यांकन गर्छ भने सकारात्मक रूमा लिनु पर्ने हो । नत्र भने पार्टीले जे निर्णय गर्छ मलाई स्वीकार हुन्छ ।
० राजपामाथि लाग्दै आएको विभिन्न आरोप जस्तै, नातावाद, द्रव्यवाद लगायत के वास्तवमा त्यस्तो हो ?
— सञ्चारमाध्यमहरूमा जुन हिसावले यस्ता कुरा आइरहेको छ त्यसमा केही न केही सत्यता छ । पहिला पार्टीले सबैलाई समेटेर गयो तर अहिले समानुपातिक नामावलीमा यस्ता कुराहरू अवश्य देखिएको छ । यस्तो आरोप राजपा नेतृत्वले खण्डन गर्न सकेको छैन । अब निर्वाचन आयोगको दबाबले गर्दा हो कि के ले हो भन्न सक्दिन । पार्टीले मसहित अन्य चार जनालाई पनि यस्तै उपेक्षा गरेको छ । यो खेदको विषय हो । राजपाको यस्तो निर्णयले गर्दा मधेशमा जुन आस्था थियो त्यसमा कमी आएको छ । विभिन्न माध्यमबाट पार्टीविरूद्ध नकारात्मक टिप्पणी पनि आएका छन् । राजपाभित्र नातावाद, कृपावाद हावी भयो, घरबाली–बाहरबालीको पार्टी हो भनेर टिप्पणीहरू पनि भएकै हो ।
० अब तपाईंले के गर्नुहुन्छ ?
— अहिले म सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रतिक्षामा छु । सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो म स्वीकार गर्छु । अब मेरो आशाको केन्द्रविन्दू अदालत नै हो । हामीमाथि न्याय–अन्याय जे भएको छ, त्यसको सही मूल्यांकन सर्वोच्च अदालतले नै गर्छ । यहाँ संविधानभन्दा माथि कोही छैन । सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउँछुं भन्ने विश्वासका साथ त्यहाँ गएको हुँ । सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश हुन्छ त्यो पालना गर्छुं ।
० तपाईंमाथि जुन विभेद भयो, यसमा तपाईंका पार्टीका नेताहरूको संलग्नता कति छ ?
— पार्टीका नेताहरूको भनाइ के छ भने, मेरो नाम दलित कोटाबाट पठाएकै हो, अडान पनि लिएकै हो । त्यो अडानलाई नमानेको निर्वाचन आयोगले हो । निर्वाचन आयोगले ममाथि यो ग¥यो, त्यो ग¥यो भन्ने खालका जवाफ हाम्रा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छ । राजपाले जुन समानुपातिक सूची पठाएको छ त्यसमा दलित र मुस्लिमलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ । त्यस्तो निर्वाचन आयोगबाट भएको हो । राजपाले सुरूमा मेरो नाम दलित कोटामा राखेर पठाएको थियो र त्यो उचित थियो । तर, निर्वाचन आयोगले ममाथि जुन अन्याय ग¥यो त्यसको विरूद्धमा मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराएको छु । त्यो रिटबाट नेपालका दलित समुदायले सर्वोच्चबाट न्याय पाउँछ भनेर आशा गरेको छु ।
० तपाईं न्याय पाए पनि अब सांसद हुने अवस्था छ ?
— सर्वोच्चले भनेको छ कि अहिले मेरो पक्षमा प्रमाणहरू फेला परेको छ । अहिले प्रदेश सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरिसके, प्रमाणपत्र पाइसके । यस्तो अवस्थामा अन्तरिम आदेश गरी यो विषय वस्तुलाई गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा महसुस गरेर सर्वोच्चले निर्णय गर्छ भनेर भनिएको छ । मैले समयमै मुद्दा दायर गरेको भए झन् ठूलो उपलब्धी पाउने थिएँ ।
० प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथ ग्रहण र प्रमाणपत्र पाइसकेको अवस्थामा तपाईंको पक्षमा निर्णय आयो भने तपाईं सांसद बन्ने प्रावधान के छ ?
— यो भन्दा पहिला पनि नजिर छ । यसभन्दा अघि पनि सर्वोच्च अदालतले राप्रपाका एउटा सांसदलाई यस्तै खालको मुद्दामा निर्णय दिएको थियो । राजपाले कलस्टरअनुसार नाम पठाए पनि निर्वाचन आयोगले किन गरेन, यसमा राजपाको दोष हो कि आयोगको ? यसको निक्र्योल निकाल्ने सर्वोच्च अदालतको काम हो ।
० त्यसो भए तपाईं न्याय पाउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
— म त विश्वस्त छु । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार समानुपातिक समावेशिताको आधारमा सबैले न्याय पाउँछन् । त्यो अधिकार सुनिश्चितताको क्रममा मसँग भएको अन्यायलाई निरूपण गरी अधिकार दिलाउने क्षमता सर्वोच्च अदालतमा छ । कुनै देशको न्यायालयमाथि सबैको आस्था हुन्छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतले दलितको पक्षमा न्याय गर्छ ।